Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App) – Page 47 – Myanmar Mobile App
Author: Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)
Zawgyi Version ဒါဟာ အနာဂတ်ရဲ့ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် 3D printing ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့လက်တုတွေ၊ ပေါ့ပါးတဲ့ EV အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့အတူ အာကာသယာဉ်တွေကိုတောင်မှ ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနဲ့ လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့် MIT ရဲ့ Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) မှ သုတေသီတွေကို တည်ဆောက်ဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ မောင်းသူမဲ့ဘုတ်တွေကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာ အနာဂတ်မောင်းသူမဲ့ ပို့ဆောင်ရေးရဲ့ တစေ့တစောင်းပုံရိပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ပုံမှန်ဘုတ်တွေနဲ့ မတူတာကတော့ ဒီ3D-printed ဘုတ်လေးတွေက လေးထောင့်ပုံစံရှိပါတယ်။ ဘေးဘက်တွေကိုရွေ့လျားနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်း၊ အခြားဝတ္ထုတွေနဲ့ တွယ်ကပ်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းရှိပြီးတော့ ပေါလောမျောနေတဲ့တံတားတွေအဖြစ် တပ်ဆင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ရေပေါ်ဂီတပွဲတွေနဲ့ မိုဘိုင်းလ်အစားအသောက်ဈေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက် သုတေသီတွေက လေးထောင့်ပုံစံအဖြစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ ၁၆ပိုင်းကို […]
Posted on May 27, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Posted on May 25, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
iPhone X Plus မှာထပ်ပြီးတော့ Android တွေကိုကျော်လွန်ပြီး ကမ္ဘာ့စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်လာနိုင်
Zawgyi Version စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှာ ထူးခြားတာတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ Apple က ကမ္ဘာ့စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းအဖြစ်နဲ့ မရပ်တည်နိုင်တော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ အဲဒီစာသားလေးကို နည်းနည်းပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်။ Apple ရဲ့ iPhone X, iPhone 8 Plus နဲ့ iPhone 8တို့မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ A11 Bionic processor လေးက လက်ရှိရနိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းတွေထက် သာလွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Apple ရဲ့ flagship iPhone သုံးခုလုံးဟာ GeekBench ရဲ့ single-core test မှာတောင် 4200 ရထားပါတယ်။ ထိပ်တန်း Android ဖုန်းတောင်မှ ၃၄၀၀ ပဲရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 2017 iPhone တွေတုန်းကလည်း multi-core test မှာ 10200 အထိ […]
Posted on May 25, 2018 May 25, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
ipega PG – 9078 Universal Wireless Bluetooth Game Controller Review
Zawgyi Version ဒီကောင်လေးကဘာပစ္စည်းလဲဆိုတာကတော့ ပြန်ပြောနေဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ipega ကထုတ်တဲ့ ဂိမ်း controller လေးတစ်ခုပါပဲ။ ဖုန်းနဲ့ bluetooth ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ဆော့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆော့ကစားဖို့အတွက် နည်းလမ်းလေးတွေကို မပြောခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ အချက်အလက်လေးတွေကို အရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Specification General Brand: Ipega Model: PG – 9078 Functions: Bluetooth Bluetooth Version: V3.0 Compatible with: Android,IOS,PC,Tablet PC,TV Features: Cable,Joystick Connection Type: Bluetooth System support: Android,IOS,PC Interface: USB Material: ABS Power Battery Type: Built-in Battery Capacity (mAh): 380mAh Charge way: USB […]
Posted on May 21, 2018 May 21, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Zawgyi Version သင့်မှာ Huawei or Honor ဖုန်းရှိတယ်ဆိုရင် Google Maps ကို သုံးနေတဲ့ app တချို့က ကြော်ငြာထားတဲ့အတိုင်း အလုပ်မဖြစ်တာကို တွေ့မိလောက်မှာပါ။ fix ထွက်ဖို့လုပ်နေတုန်းမှာ အချို့ကတော့ fix လုပ်လည်း အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ ပြောနေကြပါတယ်။ ဒီထက်ဆိုးတာက Google Play Services update က Google Pay crash နဲ့ Google Home ချိတ်ဆက်မှုတွေကို အဆင်မပြေဖြစ်စေပါတယ်။ update ဟာ Android Auto နဲ့လည်း ငြိနေပြီးတော့ microphone button နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း error တွေတက်နေပါတယ်။ Android version ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Huawei နဲ့ Honor တိုင်းလိုလိုမှာ […]
Posted on May 18, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
နောက်ထွက်မယ့်ဖုန်းတွေကို ‘ThinQ’ ဆိုပြီးတော့ LG က နာမည်ပြောင်းမှာလား
Zawgyi Version LG G6 နောက်ထွက်ဖုန်းကို LG G7 ThinQ လို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီး LG က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်များ LG G7 လို့မခေါ်တာလဲ။ “ThinQ” ဆိုတာ ဘာများပြောချင်တာလဲ။ “ThinQ” ကို ဘယ်လိုအသံထွက်ရမှာလဲ။ “think” or “thin queue”? LG က LG V30 ကို နည်းနည်းလေး upgrade လေးလုပ်မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ LG V30S ThinQ ဆိုပြီးတော့ မိတ်ဆက်မှာပါ။ နားထဲဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး။ ThinQ ကို ဘာလို့များ rebrand လုပ်မယ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ ကနေဒါက LG website လေးမှာ LG G6 လေးကို LG […]
Zawgyi Version HTC U12 Plus ကို launchလုပ်ဖို့အတွက် ခြောက်ရက်လောက်လိုပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးနီးပါး ကျွန်တော့ဆီကို ရောက်လာပါပြီ။ Evan Blass က ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေရေးသားထားတဲ့ စာရွက်လေးကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ Evan Blass ကတော့ စမတ်ဖုန်းသတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအချက်အလက်တွေကို သူ့ကြောင့် သိရတာမဟုတ်လား။ ဒါဟာပေါက်ကြားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မှားချင်လည်း မှားနိုင်ပါတယ်။ HTC က HTC U12 Plus ကို မေ၂၃ရက်နေ့မှာ ထုတ်မပြခင် ကြိုသိရမယ်ဆိုတော့လည်း ကောင်းတာပဲလေ။ HTC U12 Plus ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကတော့ တွစ်တာပေါ်မှာ တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ HTC U11 ကို လုပ်ပေးထားတဲ့ […]
Posted on May 17, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
ကြော်ငြာထဲမှာ Apple ကို ခလုတ်တိုက်ပြီး Galaxy S9 ကို ကြေငြာခဲ့တဲ့ Samsung
Zawgyi Version Samsung က ကြော်ငြာကမ်ပိန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ Apple ကိုမထိခလုတ်လေးတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ပြောချင်တဲ့လိုရင်းကို မထိခဲ့တာ များနေတာပါ။ အခုဆိုရင်လည်း Galaxy S9 ကို ကျော်ကြားအောင်လုပ်တဲ့ဗွီဒီယိုလေးမှာလည်း ပေးချင်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို မြင်အောင်မပြနိုင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။ Galaxy S9 ဟာ စမတ်ဖုန်းကောင်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားပေမယ့်လည်း iPhone နဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့အတွက် ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ . . . ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆိုးတွေချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုးသွားတာက Samsung က သူ့ရဲ့ ပူပူနွေးနွေး flagship လေးကို လေးနှစ်လောက်ဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်က iPhone6နဲ့ ယှဉ်ပြထားတာပါ။ ဗွီဒီယိုလေးကတော့ တစ်မိနစ်လောက်ပဲကြာတာဖြစ်ပြီးတော့ iPhone6အသုံးပြုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က လေယာဉ်နဲ့မိသားစုဝင်တွေဆီ ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာ […]
Apple ရဲ့ 18W Fast Charger လေးဆိုပဲ
Zawgyi Version iPhone ၀ယ်ထားပြီးတဲ့သူတွေကို စိတ်ပျက်သွားစေမယ့်သတင်းလေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေက အားအမြန်သွင်းစနစ်ပါပေမယ့်လည်း အားသွင်းတဲ့ဟာလေးကို ဘူးထဲမှာထည့်မပေးလိုက်ဘူးလေ။ ဒီတော့ Apple ဆီကနေ သက်သက်ဝယ်ကြရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း အဆင်ပြေတဲ့ third-party တွေဆီကနေ ၀ယ်ရပြီပေါ့။ iPhone 8 ရော iPhone X မှာပါ။ USB Type-C charging ပါဝင်ပါတယ်။ ကောလဟာလတွေထွက်နေတာက ၂၀၁၈ iPhone တွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် charger လေးတွေကို ဘူးထဲမှာထည့်ပေးမယ်။ အခုတော့ ဘယ်လိုပုံလေးတွေလည်းဆိုတာကို 3D render လေးတွေနဲ့ ခံစားကြည့်လိုက်ရအောင်။ ဒီပုံလေးတွေကို RedmondPie မှ ယူပြီးဖော်ပြထားတာပါ။ ChargerLab ရဲ့ပညာရှင်တွေက USB Type-C connector လေးကို ထိပ်မှာထည့်ထားပြီးတော့ Lightning-to-USB […]